အချိုမှုန့် ဆိုသည်မှာ ဘာလဲ။
အချိုမှုန့် ဆိုသည်မှာ ပရိုတင်းတို့၌ အရေးကြီးပါဝင်ဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုအဖြစ် တွေ့နိုင်သော အမိုင်နိုအက်စစ်တစ်မျိုး ဖြစ်သည့် ဂလူတာမစ်အက်စစ် (Glutamic Acid) ၏ ဓာတ်ဆားပုံဆောင်ခဲ ဖြစ်သည်။ အချိုမှုန့်၏ ဓာတုအမည်မှာ MSG ခေါ် မိုနိုဆိုဒီယမ် အယ်လ်-ဂလူတာမိတ် (Monosodium L-Glutamate) ဖြစ်ပြီး၊ မော်လီကျူးအလေးချိန်မှာ 187.13 ဖြစ်သည်။ ရေပုံဆောင်ခဲ မော်လီကျူး 1 ခုပါဝင်သည့် အချိုမှုန့်သည် ပုံဆောင်ခဲသဏ္ဍာန် သို့မဟုတ် အဖြူရောင် ပုံဆောင်ခဲအမှုန့် အဖြစ် တည်ရှိပြီး၊ အနံ့မဲ့ကာ သီးသန့်လက္ခဏာဆောင် အရသာရှိသည်။ အစားအစာများ၏ အရသာကို တိုးတက်ပြုပြင်မှု ပေးနိုင်သည့်ပစ္စည်း ဖြစ်သည်။
ဂလူတာမိတ်မှာ အယ်လ်-ဂလူတာမိတ် (L-Glutamate) နှင့် ဒီ-ဂလူတာမိတ် (D-Glutamate) ဟူ၍ အမျိုးအစားပုံစံ (2)မျိုးရှိပြီး၊ အရသာဖြည့်စွက်ဒြပ်ပစ္စည်းအဖြစ် ဆောင်ယူသုံးစွဲသည့် အမျိုးအစားမှာ အယ်လ်-ဂလူတာမိတ် ဖြစ်သည်။
အချိုမှုန့်ကို လူသားတို့ မည်သို့ တွေ့ရှိလာပါသနည်း။
လူသားတို့သည် အချိုမှုန့် ဆိုသည့် ပစ္စည်းကို လွန်ခဲ့သည့်ရှေးခေတ် နှစ်ပေါင်းနှစ်ထောင်ကျော် ကာလတည်းကပင် သိရှိခဲ့ကြပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ဆိုရပါက တရုတ်နှင့် ဂျပန်လူမျိုးတို့သည် အေးမြသော ပင်လယ်ရေတွင် ပေါက်ရောက်သည့် ပင်လယ်ရေညှိအကြီးစားတစ်မျိုးကို ဆောင်ယူ၍ ၎င်းတို့၏ စွပ်ပြုတ်ရည်အား အရသာကောင်းစေရန် ပြုလုပ်သုံးစွဲမှု ပြုခဲ့ကြပါသည်။ အနောက်နိုင်ငံသားများအနေဖြင့်မူ ၎င်းတို့၏ အစားအစာများကို အရသာ ကောင်းစေရန်အတွက် မှို၊ ခရမ်းချဉ်သီးများကို သုံးစွဲခဲ့ပါသည်။ နောင်ခရစ်နှစ် (1908)ခုနှစ်အရောက်တွင်မူ တိုကျိုတက္ကသိုလ်မှ ပါမောက္ခ Kikunae Ikeda သည် ပင်လယ်ရေညှိ (Laminaria Japonica) မှနေပြီး ဟင်းခတ်အရသာဖြည့်ပစ္စည်း (Flavoring agent) ကို ခွဲခြား ထုတ်ယူ နိုင်ခဲ့ကာ၊ ၎င်းသည် အစားအစာများကို အရသာကောင်းမွန်တိုးတက်စေနိုင်သည့် Seasoning agent ဖြစ်သော ဂလူတာမိတ် ဆိုသည့်အရာပင် ဖြစ်ပါသည်။
ဂလူတာမိတ်ကို မည်သည့်ပစ္စည်းများ၌ တွေ့နိုင်သနည်း။
ဂလူတာမိတ်သည် သဘာဝအရ တွေ့ရသည့် ဒြပ်ပေါင်းတစ်မျိုးဖြစ်၍၊ အစားအစာအမျိုးတိုင်းနီးပါးလောက်၌ ဥပမာ အသား ငါး နို့ မိခင်နို့ ဟင်းရွက် ပဲ ဒိန်ခဲ ခရမ်းချဉ် နှင့် အခြားစားစရာများ၌ တွေ့နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ လူသားများမှ ဂလူတာမိတ်ကို မိမိကိုယ်တွင်း၌ ထုတ်လုပ်မှုပြုနိုင်ပြီး၊ ၎င်းတို့ကို ဦးနှောက်ကြွက်သားအပါအ၀င် အခြားတစ်ရှူးများနှင့် အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း များ၌ပါ တွေ့ရှိနိုင်သည်။
သဘာဝ၌ ဂလူတာမိတ်ကို ပုံစံ (2) မျိုးဖြင့် တွေ့ရှိနိုင်သည်။
1. စုစည်းတွယ်ကပ်နေသည့်ပုံစံ (Bound Form) - အခြားအမိုင်နိုအက်စစ်အမျိုးအစားများနှင့် ပေါင်းစည်းတွယ်ကပ်လျက် ပရိုတင်းအဖြစ် ဖြစ်တည်နေမှု
2. လွပ်လပ်စွာတည်ရှိသည့်ပုံစံ (Free Form) - အစားအစာကို အရသာရှိစေသည့် အရေးပါသော ပုံစံအမျိုးအစား ဖြစ်သည်။
အချိုမှုန့်ကို မည်သို့ ထုတ်လုပ်ကြသနည်း။
Hydrolysis Method နည်းလမ်းအားဖြင့် Glutamine ပုံစံဖြင့် တည်ရှိသည့် Glutamic Acid (Glutamic Acid ၏ Monoamide) များပါဝင်မှုရှိ သဘာဝပရိုတင်းရင်းမြစ်များဖြစ်သော Wheat Gluten သို့မဟုတ် Soybean Meal မှ ချက်လုပ် ထုတ်ယူကြပါသည်။
Fermentation Method နည်းလမ်းအားဖြင့် အဏုဇီဝပိုးမွှားအမျိုးအစားတစ်ချို့ကို သုံးစွဲကာ ပီလောပီနံကော်မှုန့် (Tapioca-Starch) ကို Hydrolyze လုပ်ရာမှ ရရှိသည့် သကြားကို စိမ်၍အချဉ်ဖောက်ခြင်းဖြင့် သို့မဟုတ် တင်လဲရည် (Cane Molasses, Beet Molasses) တို့၌ ပါရှိသည့် သကြား (Glucose, Fructose, Sucrose) ကို အချဉ်ဖောက်ခြင်းဖြင့် ထုတ်ယူကြပါသည်။
ကိုးကား - ဒေါက်တာ ဖတ်ခ်ဒီ ဖိုထိစိရိ ရေးသားသော သန့်ရှင်းကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်စာအုပ်မှ “အရသာဖြည့်စွက် ဒြပ်ပစ္စည်းများနှင့် ဟင်းချိုမှုန့်အမျိုးအစားတစ်ချို့အကြောင်း သိကောင်းစရာ” နှင့် ဂလူတာမိတ်သတင်းအချက်အလက်ဌာန (Glutamate Information Center - GIC) မှ ရရှိသော စာတမ်းမှနေ၍ အချိုမှုန့်ထုတ်လုပ်သူလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ ဘာသာပြန်ပြုစုထားသည့် ဆောင်းပါးများ
အချိုမှုန့်သည် မည်သည့်အကျိုးကျေးဇူးများ ရှိသနည်း။
သက်ကြီးသူများ၌ စားသောက်လိုစိတ်ကို ပိုမိုစေသည်။
များစွာသော သက်ကြီးသူတစ်ချို့၌ ၎င်းတို့ ပျိုရွယ်စဉ်အချိန်ကလို အရသာကို ခံစားနိုင်သည့် ရသာဖုများ လျင်မြန် အားကောင်းမှု မရှိတော့သဖြင့် စားသောက်ရာတွင် အရသာ သိပ်မတွေ့တော့ခြင်း စတင်၍ ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ထိုသက်ကြီးသူများတွင် အစားအစာကို ငြီးငွေ့စိတ် ဖြစ်လာပြီး၊ တစ်ဖြည်းဖြည်း ပိန်ချုံးလာနိုင်ပါသည်။ ဤပြဿနာအတွက် အစားအစာထဲသို့ အချိုမှုန့်ကို အနည်းငယ်တိုး၍ ထည့်သွင်းပေးရုံဖြင့် သက်ကြီးသူများ၌ အစားအစာ၏ အရသာကို ပိုမို ကောင်းမွန်ထိရောက်စွာ သိရှိခံစားစေနိုင်ကာ ဖြေရှင်းကုစားပေးနိုင်ပါသည်။
အစာအိမ်နှင့် တံတွေးဂလင်းကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်စေအောင် ကူညီပေးနိုင်သည်။
အစာအိမ်သိမ်ကျုံ့ဝင်သွားမှု သို့မဟုတ် တံတွေးဂလင်းကောင်းစွာ အလုပ်မလုပ်နိုင်မှု စသည့်အခြေအနေများ ကြုံတွေ့ ရသည့် လူနာများတွင် ပါးစပ်တွင်း တံတွေးခြောက်ခမ်း၍ အစာစားလိုစိတ် ကင်းမဲ့မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဤကိစ္စ၌ လူနာအတွက် အစားအစာထဲ အချိုမှုန့်ထည့်သွင်းပေးပြီး အရသာဖြည့်စွက်ပေးခြင်းသည် လူနာအား အစားအစာကို ပိုမို စားသောက်စေလိုစိတ်ရှိအောင် လှုံ့ဆော်အားပေးနိုင်သည်။
အစားအစာတွင်းရှိ ဆိုဒီယမ်ပမာဏကို လျှော့ချရာ၌ ကူညီပေးနိုင်သည်။
အငန်အရသာကို စွဲလမ်း၍ မိမိကြိုက်နှစ်သက်သည့် အရသာ ရရှိအောင် အစားအစာတွင်း ငံပြာရည် သို့မဟုတ် ဟင်းခပ်ဆား အမြောက်အမြား ထည့်သွင်း ချက်ပြုတ်လေ့ရှိသူများ အနေဖြင့် အချိုမှုန့်အနည်းငယ်ထည့်သွင်းပေးခြင်းဖြင့် ဟင်းခပ်ဆားကို လျှော့ထည့်ကာ ချက်ပြုတ်နိုင်သည်။ သုတေသနရလဒ်များအရ ထိုသို့ ထည့်သွင်းချက်ပြုတ်ရာတွင်လည်း အရသာမှာ နဂိုမူလချက်ပြုတ်နေကျထက် အရသာကောင်းမွန်မှု မနိမ့်ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ ထို့ကြောင့် အစားအစာကို အရသာ မပြောင်းလဲစေပဲ အစားအစာထဲသို့ အချိုမှုန့် အနည်းငယ် ထည့်သွင်းပေးခြင်းဖြင့် ဟင်းခပ်ဆားသုံးစွဲရမှုကို လျှော့ချပေးနိုင်သည်။